Insetcide | SHWE THIT OO | Page 2
Toor (Pigeon Pea)
Sultani (Velvet Beans)
Black Matpe Processed
Green Moong Processed
Black Eye Bean Processed
Toor Whole Processed
OP Type (Open Pollination)
Thit San Quality Seeds (F1 Hybrid)
Elephant & Ball Brand (F1 Hybrid)
Water Souble Fertilizer
ပင်လုံးပျံ့အရည်ဖျော်ပိုးသတ်ဆေးမှုန့် Active Ingredient: Acephate ……….. 75% WP ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးမှုန့် (၄၀-၅၀)ဂရမ် အော်ဂင်နိုဖော့စဖိတ်အုပ်စုဝင် ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။ ထိသေစားသေနှင့် ပင်လုံးပျံ့အာနိသင်ရှိ ရေဖျော်ပိုးသတ်ဆေးအမှုန့်ဖြစ် ပါသည်။ သီးနှံမျိုးစုံတို့တွင် ကျရောက်သော စုပ်စားပိုး၊ သီးလုံးဖောက်ပိုး၊
ထိသေစားသေ အဆိပ်ငွေ့အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေး Active Ingredient : Chlorpyrifos …………. 50%EC Cypermethrin …………. 5%EC ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးရည် (၂၀-၄၀)စီစီ အော်ဂင်နိုဖော့စဖိတ်အုပ်စုနှင့် ပိုင်ရီသရိုက်အုပ်စု (၂)မျိုးပေါင်းစပ်ထားသော အစွမ်းထက်ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။ ဆေး(၂)မျိုးပေါင်းစပ်ထားသဖြင့် အာနိသင်
ထိသေစားသေ အဆိပ်ငွေ့အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေး Active Ingerdient: Chlorpyrifos ………….. 48%EC ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးရည် (၄၀-၆၀)စီစီ ဖော့စဖိတ်ဓာတ်ပေါင်းအုပ်စုဝင် ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်သည်။ ထိသေ စားသေနှင့် အဆိပ်ငွေ့အာနိသင်ရှိသည်။ အညွန့်၊ အပွင့်နှင့် အရွက် အောက်ဘက်ရှိ စုပ်စားပိုးများ၊
ထိသေစားသေ ပိုးသတ်ဆေးခဲ EMADO 10 WDG ရေ(၄)ဂါလန်တွင် ဆေးခဲ (၅-၁၀)ဂရမ် အီမာဒို(၁၀)ဒဗလျူဒီဂျီ ရေဖျော်ဆေးခဲသည် အင်းဆက်ပိုးများကို အကြောဆွဲ၍ သေစေသည်။ အထူးသဖြင့် ဂေါ်ဖီနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင် ကျရောက်သော စိန်ကွက်ဖလံနှင့် ယင်ဖြူများ၊ စပျစ်တွင်ကျရောက်
Monday / May 22nd / 2017
Wednesday / August 30th / 2017
Tuesday / August 8th / 2017
K-13, Yuzana St, Bayint Naung Whole Sale Market, Mayamgone Township, Yangon, Myanmar.
+95 (1) 3686750, +95 (1) 3682285, +95 (9) 73154610, +95 (9) 973689100, +95 (9) 973689110, +95 (9) 450013575
Post code : 11062
© 2017-2021 Shwe Thit Oo Co., Ltd. All rights reserved.
Web Design & Development by NetScriper